महरालाई फसाउने रोशनीलाई कसले दियो ज्या'न मार्ने धम्की !
महरालाई फसाउने रोशनीलाई कसले दियो ज्या’न मार्ने धम्की !
काठमाडौँ – तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई फसाउने रोशनी शाहीले आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको बताएकी छन् । आफ्नो र श्रीमानको ज्यान मार्ने धम्की दिएर महरा विरुद्ध बोल्न लगाएको बताएकी हुन् ।
शाहीले नै महरामाथिको आरोप कपोकल्पित भएको बताएकी छिन् । उनले आफुलाई प्रयोग गरेर महरालाई फसाएको स्पष्टोक्ति दिएकी छिन् ।
शाहीले महरा निर्दोष र रहेको र आफू प्रयोग भएको कुरा आफ्नौ फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेकी हुन् । काँग्रेस निकटका संचारमाध्यमहरुले आफूलाई जबर जस्ती सभामुख बिरुद्ध बोल्न लगाएको खुलासा गरेकी छिन् ।
महराको बिरुद्धमा नबोलेको खण्डमा आफू र आफ्नो श्रीमानको ज्यान लिने धम्की दिएपछि वाध्य भएर आफूले महराबिरुद्ध हुँदै नभएको आरोप लगाएको बताएकी छिन् । फेसबुकमा उल्लेख गर्दै शाहीले आफूमाथि अत्याचार नै भएको हुँदा त्यस्ता तत्वहरुसँग नडराउने गरेकी छिन् ।
‘सभामुखमाथि लगाइएको आरोप झुठ, कपोकल्पित, उनलाई सत्ताबाट पदच्युत गर्न गरिएको डिजाईन हो । जसको लागि मलाई प्रयोग गरियो । डर त्रास र धम्कीबाट तैले महरालाई बलात्कारको आरोप लगाइनस् भने म र मेरो श्रीमानको ज्यान लिने धम्कीका कारण मैले नचाहँदा नचाहँदै पनि झुठ बोलेको हुँ ।’ उनले लेखकी छन् ।
रोशनीले शाहीले फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘एउटा काँग्रेसको मिडिया म बसेको ठाउँ पत्ता लगाउँदै आयो । त्यही भिडियोको कुरालाई लिएर सभामुख निर्दोष हुँदाहुँदै पनि दोषी ठहर्याइयो । महरा सरले रक्सी ल्याएको पनि छैन न त उनि कुनै महिलाको कोठामा नै गएका छन् । सत्य सत्य नै हो र सत्य यही हो ।
शाहीले महराको बदनाम गराउने खेलमा उपसभामुख नै लागेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । उनले फेसबुकमा लेखेर सभामुख बन्नका लागि उपसभामुखले नै विभिन्न प्रप्रञ्च रचेको बताएकी छिन् ।
‘मलाई भाइरल हुने कहिल्यै चासो भएन, महरा सरले न्याय पाउनुहुन्छ’, उनले लेखेकी छिन्, ‘उहाँलाइ बदनाम गराउने उप देखि उपसम्म हुन् ।’आफ्नो डेरा पत्ता लगाएर रातको समयमा आउने पत्रकारलाई उनले रअको पत्रकार समेत भनेकी छिन् ।
फेसबुमा उनको फोटोसहितको समाचार शेयर गर्दै उनले लेखेकी छिन्, यही चोर हो मेरो कोठा पत्ता लगाएर मलाई जबर जस्ती महराको बिरुद्धमा बोल्न बाध्य बनाउने रअ पत्रकार’ ।